Fanondranana vehivavy an-tsokosoko any ivelany: aondrana atsy Kaomaoro vao alefa any Arabia Saodita | NewsMada
Alaina any amin’ny faritany. Aondrana amin’ny sambo ao Mahajanga, alefa atsy amin’ny Nosy Kaomaoro. Any indray no alefa mihazo an’i Arabia Saodita. Saron’ny polisy ihany ny tambajotra voarindra mpanondrana olona (vehivavy) an-tsokosoko any ivelany.
Tsy mety fay mihitsy! Nosamborin’ny polisy avy ao amin’ny “services des enquêtes spécialisés » (SES) tao amin’ny seranan-tsambon’i Mahajanga, ny 15 mey 2019 lasa teo ny vehivavy iray 32 taona, noho izy voarohirohy tamina fikasana hanondrana vehivavy malagasy any ivelany. Araka ny fanazavan’ny polisy, ny fihetsika hafahafa sady tsy mahazatra eny am-piaingana eny an-tseranana no tsikaritry ny polisy tamin’io fotoana io ka nanomboka teo ny fanadihadiana. Fantatra tamin’izany fa hanatitra vehivavy gasy roa handeha hihazo ny Nosy Kaomaoro ity vehivavy tratran’ny polisy ity. Voalaza tamin’izany fa vehivavy nikasa hiondrana hiasa any Arabia Saodita ireto vehivavy roa ireto ka any Kaomaoro izy ireo no handray ny sidina hihazo ity tany arabo ity. Nandritra ny famotorana ihany koa no nahafantarana fa efa tambajotra voarindra mihitsy no manao ity fanondranana olona ity. nambaran’ny tatitra avy amin’ny polisy fa hafarana avy any amin’ny faritra hiakatra eto Antananarivo ireo vehivavy gasy izay liana amin’izany asa any ivelany izany.
Hakana vola 1 200 000 Ar…
Misy mampiantrano eto Antananarivo izy ireo mandritra ny fikarakarana ny taratasiny ary hakana vola 1 200 000 Ar isan’olona. Aterina any Mahajanga indray avy eo hihazo ny Nosy Kaomaoro. Efa misy olona hafa indray mandray sy mampita azy ireo any Arabia Saodita. Natolotra ny fitsarana omaly ity vehivavy mpanondrana an-tsokosoko olona ity. Efa naaton’ny fanjakana ity fandefasana vehivavy miasa any amin’ity tany Arabo ity kanefa mbola misy ihany ireo tambajotra mahita irika handefasana olona any an-toerana. Misy koa ireo vehivavy voarebirebin’izy ireo ka manaiky ny hiondrana ihany na dia efa ireny niara-nahita ireny aza ny manjo ireo vehivavy malagasy miasa any Arabia Saodita sy Koweit hatrany Liban.
Tena ady fa tsy sarin’ady izao… 08/07/2020
Tsy nandaitra ny herin’ilay mpampandro dahalo: mpanao odibala, maty voatifitra 08/07/2020
Les journaux Les Nouvelles et Taratra du 08 Juillet 2020 08/07/2020
Les indésirables du 08 Juillet 2020 08/07/2020